Maitiro ekugadzira otomatiki mhinduro muMail ye macOS | Ndinobva mac
Maitiro ekugadzira otomatiki mhinduro muMail ye macOS
Chokwadi kana iwe uri pazororo, zvishoma zvaunoda iwe kugamuchira maemail pane yako nhare kana pakombuta yako. Nekudaro, unenge uri mufananidzo wakashata iwe nekambani yako, kwete kupindura kune chero wavo. Zvirinani kuzivisa kuti iwe uri pazororo mune yakatarwa nguva uye kuti mushure menguva ino uchazobata munhu uyu. Naizvozvo, chinhu chakanakisa kumisikidza otomatiki maemail anozozivisa iro rimwe bato kuti iwe hausipo.
Kana iwe uri mumwe munhu anoshandisa email mutengi we macOS, Tsamba, isu tinokubatsira iwe, nhanho nhanho, maitiro ekugadzirisa aya otomatiki mhinduro. Uye zvakare, ichave yakapusa sekugadzira iyo uye gare gare unokwanisa kuishandisa zvakare kakawanda sezvaunoda. Ndokunge, iwe unogona kumisikidza uye kuvamisa paunoda. Iwe unofarira iyi email? Verenga zvakanaka kuenderera gadzira yako wega otomatiki mhinduro muMeyili pane macOS.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura «Tsamba». Inbox yedu yese ichafukunurwa. Nekudaro, hapana chiripo chinotifadza panguva ino. Tinofanira kuenda kune zvido zvekushandisa. Ndokunge, mune yemenu bar isu tinodzvanya pane "Mail" sarudzo. Mukati tichafanira tsvaga "Zvaunoda" uye pakati penzira dzakasiyana isu tinongofarira iyo inoratidzwa ne «Mitemo».
Iwindo idzva richaonekwa uye tichafanirwa ku «Wedzera mutemo». Zvichava pano apo patinogadzirisa zvese izvo tsamba yedu ine otomatiki mhinduro ichave iine. Kuti ndikupe zano, isu takagadzira bvunzo mutemo wekuti iwe unofanirwa kunyatsoteedzera kubvisa iwo mameseji ayo anotumirwa achagamuchira mubhokisi ravo rekuyedza kana achiedza kubata iwe.
Rangarira kusarudza minda yese sezvo isu tichikusiya iwe mumifananidzo yedu; kana zvisina kudaro inokupa iko kukanganisa kusingatenderi iwe kuti ugadzire mutemo wese. Uye kana yangogadzirwa, rangarira kudzima otomatiki mhinduro kusvikira iwe waida kuti iitwe. Ukasadaro, aya autoresponders anotanga kushanda kubva paminiti zero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekugadzira otomatiki mhinduro muMail ye macOS